Ganacsatada Soomaaliyeed ee Muqdisho oo lacag badan ku bixisa maritaanka waddooyinka Caasimadda +SABAB ! | HalQaran.com
Home Wararka Maanta Ganacsatada Soomaaliyeed ee Muqdisho oo lacag badan ku bixisa maritaanka waddooyinka Caasimadda...
Ganacsatada Soomaaliyeed ee Muqdisho oo lacag badan ku bixisa maritaanka waddooyinka Caasimadda +SABAB !
Qeybo ka mid ah waddooyinka Muqdisho oo xiran/Sawir Hore/ Photo: REUTERS/Feisal Omar
Muqdisho (Halqaran.com) – Iyadoo inta badan wadooyinka Magaalada Muqdisho gudaheeda ay yihiin kuwa xiran oo Koontaroolo ay u yaalaan Ciidamada Booliska, halka qaarkoodna ay ku go,an yihiin dhagxaan islamarkaana aanan loo ogoleyn gaadiidka rayidka inay isaga kala gudbaan wadooyinka ayaa Koontaroolada qaar ee Magaalada gudaheeda Baabuurta waxa ay ku maraan inay bixiyaan lacag.
Dhamaan Isgoysyada tooska ugala wadada Maka Al- Mukarama ayaa waxaa yaalla Koontaroolo, Ciidamada jooga goobahaasi oo aan dadka si wanaagsan ula dhaqmin & awaamiir ay siiyeen Saraakiishooda, ayaa sabab u noqotay in wadooyinka ay noqdaan kuwa kala wareeg ah oo gaadiidka aysan isu kala gudbi karin.
Shirkadaha, Ganacsatada iyo kuwa Khudaarta keena Magaalada gudaheeda ayaa ka fekeray qorshe ay ku mari karaan Koontaroolada Magaalada gudaheeda, waxaana taasi ay noqotay kaliya inay bixiyaan lacag ay siiyaan Saraakiisha u talisa Ciidamada jooga Koontaroolada Muqdisho.
Mid ka mid ah Ganacsatada ku nool Muqdisho ayaa mareegta Halqaran.com u sheegay inuu laba mehrad ganacsi ku kala leeyahay Suuqa Bakaaraha & Degmada Xamar weyne, si goobihiisa ganacsiga allaabta uu u gaystana uu sameeyay inuu la macaamiilo Saraakiisha xukunta mid ka mid ah goobaha Koontaroolada ee Magaalada gudaheeda, Bishiina uu siiyo lacag si halkaasi looga sii daayo.
“Aniga laba Bakhaar ayaan ku kala leeyahay Suuqa Bakaaraha & Xamar weyne, hal Koontarool ayuu maraa gaarigeyga, waxaan la macaamilay Sarkaalka Koontaroolkaasi xukuma oo afgarasho aan siiyo, si tartiib ah ayeey Badeecadeyda ku gaarta hadba meesha aan doonaayo aniga oo aanan dhib arkin.” Ayuu yiri ganacsadaha u waramay Halqaran.com oo aan magaciisa qarinay.
Inta badan ganacsatada ayaa sameeya qorshahan waxaana ay si kala gaar gaar ah ula macaamiilaan Sarkaalka maamulaya Koontaroolka hadba ay ka gudbayaan, si shixnadahooda ganacsiga ay ugu gaaraan si fudu halka ay doonayaan.
Ugu dambeyn, dowladda Somaliya ayaa xalka suggida ammaanka Muqdisho u aragtay in la kala gooyo wadooyinka Magaalada, islamarkaana gaadiidka rayidka loo diido inay isaga kala gudbaan Degmooyinka Gobolka Banaadir, taasi oo caqabad wayn ku ah isu socodka shacabka Muqdisho.
lacago ku bixiya
maritaanka waddooyinka Muqdisho